Starbucks manangana tambajotra sosialy | Martech Zone
Tambajotra sosialy fandefasana Starbucks
Alakamisy 20 martsa 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Idéan'ny Starbucks-ko tsy mbola mifoha mifoha! Ny fametrahana tambajotra sosialy hangata-kevitra amin'ny mpanjifa mivantana amin'ireo fivarotana izay iantsorohan'izy ireo dia mety tsy hevitra ratsy. Raha misy marika fivarotana iray izay mety hahomby amin'ny tambajotra sosialy, mety ho izany tokoa i Starbucks. Marika goavambe io, na aiza na aiza, andevozin'ny olona (ara-bakiteny) ny vokatra vokariny, ary tian'ny mpanjifa izany.
Tena mifanohitra amin'ny rindrina tokoa i Starbucks. Very ny famirapiratan'izy ireo tamin'ny mpanaraka azy, tapitra ny vidin'ny fandidiana, mihasarotra ny mahita baristas lehibe, mihemotra ny fandaniam-bolan'ny mpanjifa, ary manomboka mimenomenona ireo mpifaninana toa an'i McDonalds momba ny fahaverezan'ny mpiaro ny sakafo maraina. McDonalds aza dia nisongadina an'i Starbucks amin'ny fitsapana tsiro amin'ny loha ka hatramin'ny loha.
Maninona aho tsy any amin'ny Starbucks matetika
Izaho manokana dia mitsidika ny Starbucks antsasaky ny taloha. Ankafiziko ny roast premium izay azoko avy amin'ny trano fisotroana kafe eto an-toerana ary ankafiziko fa miverina amin'ny toekarena eo an-toerana ny volako. Very ny famirapiratany i Starbucks rehefa nanomboka nahita azy ireo aho, vitsivitsy ny elanelan'izy ireo ary 30 $ isam-bolana ny vidin'ny tsy misy tariby amiko. Ao amin'ny Starbucks ihany aho rehefa Trano kafe Greenwood, Tsy azo tratrarina ny Amboara Bean.
miaraka Howard Schultz niverina teo amin'ny toeran'ny mpamily, angamba afaka nanararaotra fotoana i Starbucks. Ho hitantsika eo. Heveriko fa ny tambajotra sosialy dia hanana fivezivezena mivezivezy, izaho dia nisafidy bilaogy iray ary nangataka valiny tamin'ny alàlan'ny atiny mety hahitako tanjona kely kokoa.
Inona no ho hevitro momba ny Starbucks? Seza ahazoana aina.
Manararaotra amin'ny fomba betsaka ny fanangonanao vola
5PM: SaaS fitantanana tetikasa feno asongadina
Mar 20, 2008 ao amin'ny 6: PM PM
Kafe mendri-kaja izay tsy mila dokotera miaraka amina antsasaky ny vokatra vita amin'ny ronono hanakendaana azy no mety ho hevitro ao amin'ny Starbucks.
Pint, mazava ho azy. Indray andro any dia hianatra manamboatra vera alohan'ny hidirana hiditra.
Mar 20, 2008 ao amin'ny 8: PM PM
Nijanona tsy nisotro Starbucks intsony aho rehefa tsy niandrandra anao intsony ireo barista rehefa nandray ny baiko nomenao ary nanome fanovana indray. Tsy misy maharesy ny serivisy ho an'ny mpanjifa manerantany, ary tsy ampy amin'izany i Starbucks. Manontany tena ianao raha nanampy an'io fiofanana antsasak'adiny io ??
Mar 21, 2008 amin'ny 9: 39 AM
Starbucks lasa McDonalds of cafe, raha ny hevitro. Araka ny voalazan'i Eric etsy ambony, dia nidina ambany tokoa ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Toa tsy liana amin'ny fomba fanaon'izy ireo any amin'ny toerana fisakafoanana haingana ny mpiasa matetika, ary tsy mifanaraka ny kalitaon'ny vokatra (na dia hiteny aza aho hoe ao amin'ny McDonalds dia mifanaraka be izany fa tsy hoe mihinana eo intsony aho matetika). Noraisin'izy ireo zavatra izay nisy cache tamina azy ireo ary nataony mahazatra.
Ho fiarovana azy ireo, tsy azoko antoka ny fomba tokony hitahirizanao ny marim-bola amin'ny sehatra lehibe eo amin'ny tsena izay mifaninana toy ny kafe amin'izao fotoana izao. Heveriko fa miaraka amin'ny lamba firakotra manerantany miaraka amin'ireo magazay Starbucks dia hisy fatiantoka amin'ny kalitaon'ny traikefa azonao rehefa mitsidika ianao, saingy mampalahelo izany. Te-hahita azy ireo manatsara zavatra aho, saingy mieritreritra aho fa manana fanamby sarotra amin'ny tanany izy ireo.
Mar 21, 2008 amin'ny 10: 15 AM
Tsy haiko raha mila tambajotra sosialy mihoatra ny mila famoahana ny tambajotra sosialy ski SkiSpace i Starbucks. Izy io dia ny isan'ny mpampiasa izay mamorona ny vokatry ny tambajotra ary manome lanja ny tambajotra sosialy, noho izany dia mitifitra ny tongony avy hatrany ireo tranonkala akany. Farafaharatsiny, IMHO 😉
Mar 21, 2008 amin'ny 10: 48 AM
Mihevitra aho fa miombon-kevitra aminao aho, Dave. Ho an'ny 'fotoana fohy', hita fa mangataka valiny fotsiny izy ireo ary tena tsy 'tambajotra sosialy' amin'ny heviny mahazatra. Mahaliana ny mahita raha toa izy ireo mampihatra ny ambony 2 - seza tsy misy tariby maimaim-poana & ahazoana aina.
Ireo roa ireo dia mitazona ny mpamonjy lava kokoa… zavatra izay mety tsy ankasitrahan'ny trano fisotroana kafe betsaka. Tsy mivarotra bebe kokoa ianao rehefa tsy misy toerana hipetrahana!
Mar 21, 2008 amin'ny 11: 03 AM
Hitantsika hatrany izany sa tsy izany? Hevitra lehibe, vokatra mivoatra ary orinasa, mizana mitrandraka marika mafana… ary avy eo manomboka mihanaka toa ny adala miaraka amin'ireo vokatra sy toerana manampy ary manomboka very ny fotony.
Mbola mijanona eo akaikin'ny Starbucks-ko isan'andro aho fa very ny antso avo nataony teny an-dalana. Tiako fa i Shultz no miverina mitondra… mampatsiahy ny Jobs hiverina any Apple… tokony hampiverina azy ireo akaiky kokoa ny fanomezana traikefa mahafinaritra. Ny fifandraisana amin'ny media sosialy dia farafaharatsiny manokatra varavarana amin'ny fomba vaovao.
Ny hevitro ho azy ireo dia ny fihainoana tsara ny antony tsy hahatongavan'ny mpanjifa efa misy, ny hafa hankany McDonalds ary ny antony ahitan'ny olona fa manahirana loatra ka tsy tokony hodinihina akory. Ny zavatra iray apetrako eo dia ny hampiatoan'izy ireo ny nickle ary hampihena ny zavatra niainany. Manaiky aho momba ny hookup tsy misy tariby. Na izany na tsy izany, eo ny valiny. Marika mahery vaika loatra ho azy ireo ny tsy mitady fomba hanamboarana azy.
Mar 21, 2008 amin'ny 11: 22 AM
Manaiky aho Phil. Manontany tena aho hoe ohatrinona no very tsotra fotsiny satria tsy manana an'io 'fofona fiara vaovao' io i Starbucks?
Ny maha-maodely dia fototra tena madinidinika hananganana ny orinasanao ary mirona hanadino ny fahitan'ny orinasa ny tenany sy ny maha-zava-dehibe azy. Heveriko fa ny fahombiazan'ny Starbuck dia ny firoboroboan'ny zava-pisotro mangatsiatsiaka miaraka amina teny maro amin'ny vidiny lafo.
Mar 22, 2008 amin'ny 11: 03 AM
Eny, nanjavona ny fientanam-po amin'ilay fiara vaovao. Tadidiko fa nihomehy ahy ny olona taloha noho ny fijanonako sy ny fampiasana an'io fiteny vahiny vaovao nianarako io.
Mety nisedra olana lehibe ho azy ireo ianao… lamaody na fanombohana lehibe amin'ny fananana ny 'traikefa maraina' very lalana. Hiteny ny fotoana.
Apr 27, 2008 ao amin'ny 11: PM PM
Na dia midera an'i Starbucks aza aho amin'ny famoronana dingana iray izay mitondra ny mpanjifa amin'ny dingan-dohan'izy ireo, misy ihany koa ny lafy ratsy izay tsy noresahinao. Ireo mpifaninana, manomboka amin'ny an'i Peet's ka hatrany amin'ny fivarotana kafe an-jorony dia afaka miditra amin'ny adihevitra fanavaozana an'i Starbucks ihany koa. Ity dia harena sarobidy tadiavin'ny mpanjifa, inona no efa notsapaina ary izay mandeha na tsy mandeha. Mba hamintinana azy io, Starbucks dia manao asa lehibe amin'ny fifandraisana, amin'izay manome fikarohana bebe kokoa momba ny tsena maimaimpoana.
Mbola mankasitraka ny zava-bitan'i Starbucks aho, fa raha izaho dia mpanao fotoana fohy dia ho hitako isan'andro ihany koa ireo tabilao soso-kevitra!
Misimisy kokoa momba io lohahevitra manokana io avy amin'ny fomba fijery tsara indrindra amin'ny: